September 17, 2020 – Sero Fero News
Posted on September 17, 2020 (September 18, 2020) by सेराेफेराेन्यूज
पाल्पा, असोज १हुँगीका ५२ वर्षीय खड्ग बहादुर फाल गाईबाख्रा चराउन कराङ्दी खोलामा गएका बेला अनायासै चितुवाले आक्रमण गर्छ । चितुवासँग खड्गबहादुरको १० मिनेट भिडन्त हुन्छ । खड्गबहादुर निरन्तर चितुवाको गर्धन (घाँटी) समाएर गुहार माग्छन् । नजिकै रहेका एक युवाले ढुङ्गा प्रहार गर्दा चितुवाको मृत्यु हुन्छ । सुन्दा कथा जस्तो लाग्ने यो घटना बिहिबार दिउँसो ११ […]
Posted in Featured, Video, फोटो ग्यालरी, मुख्य समाचारLeaveacomment
Posted on September 17, 2020 (September 17, 2020) by सेराेफेराेन्यूज
गजेन्द्र पन्थी माथागढी, असाेज १ माथागढी गाउँपालिकामा आइसोलेसन अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । संघीय सरकारको १० लाख रुपैयाँ अनुदानमा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ झडेवा देउगिरमा ५ वेडको आइसेलेसन अस्पताल निर्माण हुने लागेको हो । समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैदिदै गएपछि उपचार तथा रोकथामका लागि आइसोलेसन निर्माण गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले बताउनुभयो । […]
पाल्पा, असोज १बिहिबार कोरोनाका कारण पाल्पामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । तानसेन नगरपालिका–७, टिन्टीआँपका ५२ वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख विश्वनाथ न्यौपानेले बताए । यससँगै पाल्पामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । ५२ वर्षीय पुरुषको युनाईटेड मिशन अस्पतालले निर्माण गरेको आइशोलेशनमा मृत्यु भएको हो । बिहिबार मृत्यु […]
जुमबाट वार्षिकोत्सवमा कविता प्रतियोगिता, महिमा भइन् प्रथम
पाल्पा, भदाै ३१ दमकडा माध्यमिक विद्यालय पाल्पाले स्थापनाको ६४ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको अनलाइन कविता प्रतियोगिता सम्पन्न भएकाे छ ।जिल्लास्तरीय कविता प्रतियोगितामा मिलेनियम स्कुल तानसेन पाल्पाका महिमा गैरे प्रथम, जनता माध्यमिक विद्यालयकी सुजाता बस्याल दोस्रा, रत्न माध्यमिक विद्यालय माथागढीका विशाल बि.क तेस्रा भएका छन् । सेन्ट क्यापितानियो स्कुल तानसेनका प्रसना नेपाली र दमकडा माध्यमिक […]
‘तपाईंको सरुवा भयो हो ?’ उताबाट एक शुभचिन्तकको फोन आएपछि मैले अनभिज्ञता प्रकट गरेँ ।फेरि उनैले थपे, ‘सञ्चार माध्यममा पूरै समाचार आइसक्यो ।’ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त गरेकी पनि छैन । नबुझी के बोल्नु ! विश्वस्त हुन कार्यालयको इमेल खोल्ने प्रयास गरँे तर खुलेन । मोबाइलबाट पनि खुल्छ कि भनेर पुन: प्रयास गरेँ, डाटा पनि चलेन […]
Posted in Featured, Trending News, विचारLeaveacomment